ग्वाटेमाला भूमि सर्वेक्षण कांग्रेस को विषयवस्तु - Geofumadas
ग्वाटेमाला सर्वेक्षण गर्ने कांग्रेसका विषयहरू
नोभेम्बर, 2011 cadastre, शिक्षण CAD / जीआईएस, भूमि व्यवस्थापन
बस समाप्त भयो ल्यान्ड प्रशासनको सर्वेक्षण र सर्वेक्षण अघिल्लो महिना ग्वाटेमालामा आयोजित, प्रदर्शनकर्ताहरूको प्रस्तुतिकरण पोष्ट गरिएको छ। तिनीहरू एकल पृष्ठमा उपलब्ध छन्, यद्यपि उनीहरूलाई स्लाइड्सियरमा हेर्न व्यावहारिक छ, जहाँबाट उनीहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छन्।
म तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न र व्यक्तिगत फाइलमा बचत गर्न सल्लाह दिन्छु, आजको दिनमा कसैले पनि वेबमा के छ भनि ग्यारेन्टी गर्दैन। यो पनि एक उत्कृष्ट सामग्री हो जुन कार्टोग्राफिक क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिंदा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि तिनीहरूका लागि तयार छन्, विषयवस्तुमा अनुमानित क्रममा।
क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको दृष्टिकोण
डा। राफेल Zavala Gomez प्रवासीयहरु
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्राविधिक विकासको लागि क्षमताहरू।
किसान संगठन द्वारा शुरुवात अनुभव।
डा। सेसर एडोर्डो ओर्डोनेज,
XXI सदीको ग्वाटेमाला शहरी र ग्रामीण चुनौतिहरु
र योजना र क्षेत्रीय क्रमका उपकरणहरू
वैलिएला Reyna, ल्यान्ड मैनेजमेंट निदेशक एसईजेपाल
E ग्वाटेमाला मा ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेशन को विलशन
ग्वाटेमालामा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एक राम्रो सिंहावलोकन; कसैलाई बोलाइयो जो यो नयाँ चरणमा सुरूबाट भएको थियो।
धेरै चुनौतीहरू पनि ...
क्षेत्रीय विकासको लागि उपकरणको रूपमा क्य्याडस्ट्रे
डिएगो अर्बा, ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेशन को लिंकन टेक्नोलोजी
धेरै राम्रो, कडीस्ट्रे कसरी विकसित गर्दै देखाउँदै, र लिंकन संस्थान वा प्रकाशनको कामलाई बढावा दिन को लागी निरन्तर लिङ्क मूल्यवान।
C जीत गर्न साझेदारी: क्षेत्रीय प्रशासनका लागि सूचनाको भूमिका
डिएगो यसमा निपुण छ, म उसको प्रस्तुती शैली मन पराउँछु, दृढ दृश्य प्रभावको साथ। जे होस् यदि तपाईं घटनामा हुनुहुन्नथ्यो भने ... तपाईंले लगभग सबै कुरा हराउनुभयो।
नीदरल्याण्डमा ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
मार्टिन वाबर्बर, काडस्टर
यो प्रदर्शनीले नेदरल्याण्ड्समा कसरी Cadastre काम गर्दछ देखाउँदछ। हाम्रो भन्दा बिलकुलै फरक सन्दर्भ, तर जसमा एल साल्भाडोरको सीएनआर जस्ता प्रक्रियाहरू प्रेरित भएका छन्।
भूमि व्यवस्थापन को दुनिया मा विकास: भूमि प्रशासन मा डोमेन मोडेल, 3D मा कैडेटस्ट्रे र मुख्य रजिस्ट्रेशन
मार्टिन वाबबी, कडस्टर
Cadastre मा थ्रीडी अंकको चलनमा चाखलाग्दो धुवाँ। अफसोस, हाम्रो सन्दर्भमा यो प्राथमिकता होइन जब २ डी अझै पनि चुनौती हो, यद्यपि यो जान्न उपयोगी छ किनकि विकसित देशहरू जाँदैछन्। यो मेक्सिको सिटी, बोगोटा जस्ता ठूला शहरहरूमा पनि हाम्रो आकर्षणको उदाहरणहरू राख्नु जहाँ यो जरुरी छ।
भूमि उपयोग योजना योजनाको आधारका रूपमा क्याडस्ट्रल जानकारीको प्रयोग
एडिडी डियाज, काडस्ट्रल सूचना रजस्टर
नगरपालिकाका क्यादरेज - हाम्रो शहरका लागि अवसर वा टाउको दुखाइ?
लैंड प्रशासन को लागि लिंकन संस्थान
दिलचस्प, काल्पनिक मूल्यहरु को नक्शे को विस्तार को एक मूल्यवान नमूना; तपाईंको अपडेट एक चुनौती।
क्षेत्रका कैडेट्रास्ट परियोजनाहरूमा नयाँ प्रविधिहरूको परिचय
यो हाम्रो प्रस्तुति हो, क्षेत्रीय व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको उपयोगमा मध्य अमेरिकी सन्दर्भमा प्रवृति हुने प्रवृतिहरूमा।
Crowdsourcing र भौगोलिक जानकारी
यो अ in्ग्रेजीमा छ, सामुदायिक सहयोगबाट डाटा निर्माणको बारे रोचक प्रस्तुति। यसको सबैभन्दा दिगो उदाहरण खुला नक्सा सडक हो।
जे होस् यो विषय अस्ट्रेल देखिन्छ तर जेभियरले राम्ररी हेन्डल गरेका छन जसलाई त्यो समूह थाहा छ किनकि ऊ प्राय: पाठ्यक्रम वा सम्मेलनहरू पढाउन आउँदछ। अन्तमा धेरै राम्रो प्रतिबिम्ब, जुन मैले कुरा गरेको थिएँ राजधानीमा फर्कनुहोस्.
आईडीईको लागि ग्यासोस्भेसहरूको प्रयोग र उपभोग
यो र निम्न प्रस्तुतिकरण दुवै आदर्श र प्रवृतिहरू जान्दछन् कि ओजीसी मानकहरू छन्।
SINIT: ग्वाटेमालामा एसडीआईको पहिलो चरण?
एउटा क्लासिक यो प्रस्तुतीकरण हो, जसले ग्वाटेमालामा भू-gersrvices कसरी लागू गरिएको छ भनेर देखाउँदछ। GvSIG आईडीई ग्राहकको रूपमा रहेको रिसेप्शन, प्लस म्यापबेन्डर प्लग-इन रोचक छ; तब जियोसर्भर / अपाचे डब्ल्यूएफएस ह्यान्डल गर्नका लागि र डब्ल्यूएमएस / डब्ल्यूसीएस का लागि नक्शा सर्भर।
सेगेप्पल र सान कार्लोस विश्वविद्यालय, यस मुद्दालाई क्षेत्रमा जीवित राख्न।
सम्मेलन पेजमा प्रस्तुतीकरणहरू हेर्नुहोस्
प्रस्तुतीकरणहरू हेर्नुहोस् Slideshare मा
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो बेंटले आई-मोडेल, ODBC मार्फत अन्तर्क्रिया
अर्को पोस्ट CivilCAD मा पङ्क्तिबद्धहरू सिर्जनाअर्को »